बेवास्ता गरिएको खतरनाक रोग रेबिज – Health Post Nepal
बेवास्ता गरिएको खतरनाक रोग रेबिज
डा. शेरबहादुर पुन टेकु अस्पताल
२०७५ कार्तिक १३ गते १३:५४
डा. शेरबहादुर पुनलाई राष्ट्रिय प्रविधि पुरस्कार, जो स्वास्थ्य अधिकारीको आँखी बने, नास्टको आँखामा परे
‘डेल्टा प्लस’ कोरोनाको कस्तो ‘प्लस’? डा. शेरबहादुर पुन
खुट्टामा चोट लागेकी बालिकालाई रेबिजको खोप लगाइदिएपछि…
निजी क्लिनिकको चरम लापरबाही : रेबिजको ठाउँमा टिटानस खोप, फागुनमा मात्रै तीनको मृत्यु
कोरोनामुक्त युवामा दीर्घलक्षण
रेबिज एकप्रकारको भाइरस हो । नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा यो व्यापक रूपमा रहेको छ । विश्वमा रेबिजका कारण मृत्यु हुनेमा भारत अग्रस्थानमा पर्छ । नेपालमा पनि यो लामो समयदेखि देखापरेको रोग हो । टेकु अस्पतालको तथ्यांकअनुसार वार्षिक औसत १५–१६ जनाको मृत्यु रेबिजका कारण हुने गरेको छ । रेबिज लागेको थाहै नभई मर्ने त कति छन् कति । मेरो बुझाइमा यो संख्या ठूलो छ । समग्रमा नेपालमा रेबिजका कारण करिब सयदेखि दुई सयजनासम्मको मृत्यु हुने गरेको अनुमान छ । रेबिज संसारमै हेलचक्य्राइँ गरिएको रोगमा पर्छ ।
टेकु अस्पतालमा दैनिक करिब १ सय ५० बिरामी कुकुरले टोकेर मात्र आउने गरेका छन् । तीमध्ये सबैलाई रेबिज हुन्छ भन्ने नभए पनि रेबिजका लागि त्यो जोखिम भने अवश्य हो । पछिल्लो समय बाटामा हिँड्ने कुकुरमा रेबिजको संख्या बढेको अनुमान गरिएको छ । बिरामी भएर उपचार गराउन लगिएका १५ कुकुरमध्ये करिब १० वटामा रेबिज लागेको अनुमान गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा त शतप्रतिशतमै रेबिज लागेको पनि भेटिएको छ । पछिल्लो समय घरपालुवा कुकुरले टोकेका कारण रेबिजको सुई लगाउन आउनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
टेकु अस्पतालमा रेबिजको सुई लगाउन आउनेमध्ये करिब ६० प्रतिशत घरपालुवा कुकुरले टोकेका कारण अएको पाइएको छ । पछिल्लो समय घरपालुवा कुकुरले टोक्नेक्रम बढेकाले कुकुरले टोक्यो भनेर महानगरपालिकालाई नै गाली गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । घरमा कुकुर पाल्दा कुकुरबाट के–के रोग सर्न सक्छन् भन्ने जानकारी हुनु आवश्यक छ ।
रेबिजको उपचारमा पनि परिमार्जनको आवश्यकता छ । सडकका बेबारिसे कुकुरले टोकेमा मात्र रेबिजरोग लाग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । रेबिजरोग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । पहाडको तुलनामा तराईमा स्याल तथा ब्वाँसोको टोकाइका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । गत वर्ष तराईका विभिन्न जिल्लामा ४०–५० जनामा स्याल तथा ब्वाँसोले टोकेका बिरामी अस्पताल आएका थिए । रेबिजविरुद्धको खोप नेपाल सरकारले निःशुल्क प्रदान गरे पनि त्यसप्रतिको बेवास्ताका कारण रेबिजले नेपालीको ज्यान लिइरहेको छ ।
कतिपयको टिटानस खोप लगाएपछि रेबिजको सुई लगाउनुपर्दैन भन्ने बुझाइसमेत छ । जनावरले टोकेको करिब १ देखि ३ महिनाभित्र रेबिजरोगको लक्षण देखापर्छ । तर, मेरो उपचार अनुभवमा जनावरले टोकेको करिब ६ महिनाभित्र रेबिजको लक्षण देखापर्ने गर्छ । मैले लामो उपचार अनुभवमा पाएको छु कि– पहिले–पहिले रेबिज लागेका बिरामी एकदमै उत्तेजित देखिन्थे भने अहिले तुलनात्मक रूपमा ‘कुल’ देखिन्छन् । मर्ने अवस्थामा समेत अहिले रेबिज लागेका बिरामीले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना भनाइ राखिरहेका हुन्छन् । केही महिनाअघि अस्पतालमा रेबिज लागेको एउटा मात्रै त्यस्तो बिरामी आएको थियो, जसलाई बाँधेरै राख्नुपरेको थियो । यस्तो अवस्था अहिले यदाकदा मात्र भेटिने गरेको छ ।
– हावा र पानीदेखि बिरामी डराउनु । यो रेबिजरोग लागेको सबैभन्दा पहिलो लक्षण हो ।
– जनावरले टोकेको ठाउँमा चिलाएको अनुभव हुनु ।
– झमझम गर्नु ।
– पानी पिउन असहज महसुस गर्नु ।
– उत्तेजित हुनु ।
रेबिजरोग लागेपछि मुटु तथा कलेजोरोगजस्तो यसको उपचार सम्भव छैन । रेबिज लागिसकेपछि मर्नुबाहेक विकल्प छैन । संसारमा रेबिजका ५–७ जना बिरामी बाँचेका समाचार आए पनि नेपालमा भने त्यस्तो भएको छैन । त्यसैले रेबिज धेरै खतरनाक रोग हो ।
सबैभन्दा पहिलो त मानिसलाई रोगबारे चेतना हुनु आवश्यक छ । जनावरले टोकेको थाहा पाउनासाथ जतिसक्दो छिटो रेबिजको सुई लगाउनु आवश्यक छ । घरपालुवा कुकर तथा रेबिजको सुई लगाइएका कुकुरले टोकेमा पनि सुई लगाउन आवश्यक हुन्छ ।
Tags: डा. शेरबहादुर पुन, रेबिज